Global Voices teny Malagasy » Martinika: Ny Antoko Sosialista an’i Segolene Royal sy ny Fankahalàna ny Pelaka · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Septambra 2017 13:28 GMT 1	 · Mpanoratra Alice Backer Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Karaiba, Frantsa, Goadelopa, Martinika, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'ny Nanova na Mpitia Mitovy Fananahana (LGBT)
Segolene Royal, natolotry ny Antoko Sosialista Frantsay hofidiana ho filoha. Sary an'i Manuel MC. 
Herinandro talohan'ny nanoratana ity lahatsoratra ity, Le Blog de [Moi], blaogin'ny vehivavy Martinikana pelaka iray, dia niresaka mikasika ny fifandirana iray miainga eny anivon'ny politika anatin'ny Martinikana. Martinika, eny fa na any Amerika aza, dia Departemanta Frantsay Any an-dranomasina ( izay antsoin'ny Frantsay hoe D.O.M) ary mizaka zom-pirenena frantsay avokoa ny Martinikana. Noho izany tsy maintsy mambabony fon'ireo martinikana mpifidy ny mpanao politika frantsay avy ao amin'ny tanibe, ary tsy miavaka amin'izany i Segolene Royal, kandidà amin'ny fifidianana filohampirenena frantsay. Ilay kandidà avy amin'ny Antoko Sosialista Frantsay (izay ho antsoiko hoe SP fotsiny mba ho fohifohy), izy no ho vehivavy voalohany ho filohampirenena frantsay raha toa ka voafidy ary tafiditra ao anatin'ny fampielezankevitra ataony ny fitsidihana an'i Martinika. Na izany aza, manana adihevitra mikasika ny fifangaroana izy eo am-pelatanany satria ireo mpiasa ao amin'ny Antoko misy azy dia toa manao kabary mikasika ny fitiavana olona mitovy fananahana amin'ny tena sy ny fanambadian'ny mitovy fananahana izay tena tsy mitovy amin'ilay nambaran'ireo manampahefana ao amin'ny antoko iray io ihany fa tsy hafa ao Frantsa.
Nanokatra adihevitra mahaliana mikasika ity olana lehibe ity tamin'ny alalan'ireto teny manaraka ireto ny Le Blog de [Moi] (Fanamarihan'ny toniandahatsoratra: efa nikatona tsy misokatra intsony ny rohy mankany www dot blogdemoi dot com) :
Anton'ny tombatombana maro ny daty hahatongavan'ilay kandidà avy amin'ny Antoko Sosialista ao amin'ny nosy, izay andrasana amin'ny faran'ny volana Janoary. … Nahemotra indray mandeha, andrasana amin'ny fomba tsy ampoizina ity fitsidihana ity : … ho fanazavana tsara [izay] toerana misy an'i [Segolene Royal] manoloana ny fanambarana mankahala ny pelaka nataon'ireo olomboafidy lohandohany avy amin'ny antoko sosialista, izay misy an'i Marlène Lanoix (sekretera federaly voalohany) sy i Raymond Occolier ( solotena nasionalin'ny SP ao amin'ny fanabeazana sy ny tsiaro), ambany fiarovan'ny finoana (samy avy amin'ny fiangonana krisitianina avokoa izy roa ireo).
Manohy hatrany ilay blaogera:
Ho an'ireny olomboafidy SP ireny, ”rantsam-piarahamonina marefo” ny PaCS ary voampanga ho ”manimba” ny teny hoe fahalalahana ireo mpanohana azy. Afangaron-dry zareo ny maha-pelaka sy ny firaisana ara-nofo atao amin'ny olona ao anaty ankohonana ary farany dia toherin-dry zareo tanteraka ny fanokafana ny fanambadiana sy fananganana zaza ho an'ireo mpivady mitovy fananahana, amin'ny anaran'ny ”fomban-drazana kristiana”. Raymond Occolier, mpanolotsaina rezionalin'ny PS ao Martinika ary ben'ny Tanàna ao Vauclin, dia efa nanambara tao amin'ny oniversite fidirana ao amin'ny PS any Martinika : ”Tsy mila fanambadiana pelaka aho ! Raha toa ka maniry ny ho pelaka izy ireo, zony izany ! Ary ao amin'ny Baiboly dia milaza Andriamanitra fa fahavetavetana izany !”. Ireo olomboafidy avy amin'ny Repoblika Frantsay izay lazaina ara-pamaritana ho laika no resahantsika eto.
Teny am-piandohana i An Nou Alle [Vondrona Fisoloana Vava ny Pelaka Ao An-toerana] … dia naneho hevitra momba ity olana ity tamin'ny fitakiana tsy miolankolaka tamin'ny mpitantana ny SP etsy ankilany ny hanamelohany ireo fanambarana manohitra ny maha-laika ary tamin'ny lafiny iray hafa, ny tokony hisainana famaizana sy hampiharana izany. Amin'izao fotoana izao, ny SP sy i Victorin Lucel (sekretera nasionalin'ny SP any amin'ny O.M) dia marina fa nanameloka ireo fanambarana natao saingy mbola raharaha hafa kosa ny mikasika ireo sazy. Mifanohitra tamin'ny voalaza tamin'ny Novambra 2006, mbola tsy nentina teo anoloan'ny kaomity nasionaly misahana ny fifandirana i Marlène Lanoix ary i Ramong Occolier, ity farany izay tsy manana fahafahana manantateraka ny asany manerana ny firenena akory, tsy nentina teo anoloan'ny kaomity nasionalin'ny SP ! Tsimatimanota hoy ianao teo hoe?
Fa ahoana kosa ny momba ny kandidà SP ao anatin'izany rehetra izany? Mbola araka ny voalazan'i [Moi] ihany:
Hatramin'ny anio dia mbola tsy naneho hevitra mikasika ilay olana mihitsy i Segolene Royal ( izay mahatafiditra an'ilay manampahefana Goadelopeana Jules Otto ihany koa) raha efa mazava kosa ilay tetikasa sosialista noraisina amin'ny Mey 2006: ”Hisokatra ho an'ny mpivady mitovy fananahana ny fanambadiana sy ny fananganana zaza”. Inona no hataon'Atoa. Occolier raha toa ka mandresy amin'ny fifidianana manaraka ny SP raha ho voatazona tokoa ireo fampanantenana? Tsara apetraka ny fanontaniana…
Nandanjalanja ireo mpamaky bilaogy ary nanana ity ho lazaina i Kat :
Eny, izany tokoa no olana : ny mahafantatra raha hitàna ny teniny ny SP na tsia… Satria mampanantena zavatra maro antsika mandrakariva, kanefa tena zara raha misy mampihatra azy ireny ireo mpanao politika.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/09/17/106945/